Waa Maxay Mooshin? – Kalfadhi
Waa Maxay Mooshin?
Erayga motion; waxaa aad loo isticmaalaa marka la joogo Fiisigiska (Physics). Macne ahaan waxa uu noqonayaa isbeddel ku dhaca shayga waqti kaddib, marka loo eego barbixinta, masaafada, xawaaraha, dardargelinta, iyo waqtiga.
Marka aan joogno siyaasadda mooshin waa soojeedin lagu soo bandhigay dood ama go’aan laga gaaray mid ka mid ah golayaasha baarlamaan ee jira.
Dhaqdhaqaaqiisu ama ujeedku waa in la soo jeediyo (guuritaan), arrin laga guuro oo meel kale loo guuro; isla markaana maslaxad loo arkay in loo guuro, ka hor inta doodda ama codeynta aan laga qaban gudaha baarlamaanka.
Mooshin waa nooc isla xisaabtan ah oo u gaar ah baarlamaanka. Xildhibaannada ayaa xaq u leh inay mooshin ka keenaan wixii markaas ula muuqda in ay dhaawac siyaasadeed keenayaan iyo shaki gelinayaan madaxbannaani dalkooda; tusaale, in mooshin laga keeno xukuumad marka tiro xildhibaanno ah ay u arkeen in ay tahay mid aan xaaladda markaas la joogo aan ku habbooneyn waddanka, waxayna mooshinkooda hor keenayaan golaha iyadoo la soo faahfaahiyay, isla markaana lagu caddeynayo qodobbada dastuuriga ah ee taageeraya arrinka ay markaas ka doodayaan.
Sidoo kale waxay mooshin ka keeni karaan joogitaanka dalka ay joogaan dalal shisheeye oo markaas loo arkayo in ay halis ku yihiin jiritaanka ummadda.
Sidoo kale; waxay ka imaan kartaa oo laga gudbin karaa dhammaan shaqada hay’adaha dowladda sida; fulinta, sharci-dejinta iyo garsoorka.
Kaliya intaas ma ahane xildhibaannadu waxa ay ka doodi karaan xaalad walba oo taabaneysa bulshada, maadaama ay yihiin wakiillada shacabka, tusaale ahaan; in waxyaabaha dalka gudihiisa laga heli karo aan dibadda laga keenin, qiimaha korontada, helitaanka biyo nadiif ah, IWM.
Mooshin waxaa keeni kara toban xildhibaan, marka ay ugu yaraato, waa haddii uusan la xiriirin eedeyn madaxweyne, guuddoonka baarlamaanka ama xukuumadda.
Marka uu la xiriiro eedeyn madaxweyne waxaa qasab ah in mooshinka ay keenaan saddex meelood meel, tirada guud ee xildhibaannada.
Mooshinku wuxuu ku buri karaa ama ku dhaqangeli karaa, marka ay idlaato doodda baarlamaanka, isla markaana uu helo cod dhan 139 xubnood oo ka dhigan 50+1.
Haddii ay tahay eedeyn madaxweyne ama ansixinta qodob dastuuri ah, ama laalistiisa waa in la helaa 184 xildhibaan codadkooda oo u dhiganta saddex meelood labo meel.
28-kii Diseembar 2017 ayaa lagu daabacay Kalfadhi.com
Xukuumada Soomaaliya oo ansixisay Siyaasadda Kormeerka Iyo Qiimaynta
Madaxweyne Farmaajo Oo Bogaadiyay Isfahan Laga Gaaray Khilaafkii Galmudug